Iinkqubo zeembaleki zangaphandle | IPhone iindaba
Iinkqubo zeembaleki zangaphandle
UBreikin | | Iapps zokusebenza, Ivenkile yosetyenziso, Ezahlukeneyo
Ukuba uthanda ukubaleka, ukukhwela ibhayisikile, ukutyibiliza ngesikhephe okanye nawuphi na umdlalo ongaphandle, ngokungathandabuzekiyo esi sithuba siya kuba nomdla kuwe.
Siza kuthetha ngeenkqubo ezininzi ezinokwenza ukuba ubomi bakho bube lula xa kufikwa ekuphumeni usiya kwenza umdlalo owuthandayo, kwaye ukwazi ukwabelana ngeziphumo zakho nabahlobo bakho kwaye ugcine umkhondo wenkqubela phambili yakho epokothweni yakho.
Isicelo esisisiseko ukuba ufuna ukugcina irekhodi lakho lokuphuma, ekunokucelwa kulo okungakumbi. Kufuneka sisebenzise indawo yethu kwaye siqale ukusebenza, kwaye le nkqubo iphethe ukubhalisa indlela yethu, umgama esiwuhambayo, isantya esiphakathi, iikhalori kunye nexesha kwiimephu zikaGoogle. Kukhetho esinokukucela ukuba usixelele ngesantya esiphakathi, iikhilomitha ozihambileyo okanye ixesha ebesilisebenzisa ngalo i-headphone. Into embi kukuba, nangona yonke le nkqubo ibhalwe ngeSpanish, amazwi akwiNgesi nesiJamani kuphela, kodwa ngombono omncinci, iyaqondakala ngaphandle kwengxaki.
Olunye ukhetho endiluthandayo ngamandla khetha umculo wethu ukuyimamela ngelixa siqhuba ngokudibeneyo kwisicelo ngokwaso, sikwazi ukuhamba phakathi kweengoma okanye ukuphela kwemizuzwana eyi-10. Into efanelekileyo kukuba neefowuni ezintsha ezivela kwi-iPod okanye kwi-iPhone kwaye ucofe iqhosha elilandelayo ukuze ukwazi ukudlulisa iingoma kwii-headphone. Nge-interface, sinokongeza uluhlu, iingoma ezizodwa kunye / okanye ii-albhamu. Ngokwam, ndilungiselela uluhlu kwi-iTunes kwangaphambili ngeengoma ezithambileyo ekuqaleni nasekupheleni, ukuqala ukuzola kwaye kancinci kancinci ukwandisa ubungqongqo besingqisho somculo ukusidlulisela kwimilenze yam.
Ukhetho olwenza ukuba ngokungathandabuzekiyo lubonakale kwezinye iinkqubo zesitayile yi Cela umngeni kubahlobo ukubaleka Kwaye nokuba asikho nakwilizwe elinye, ngekhe sikwazi ukuziluma ngedatha yabahlobo bethu ngaxeshanye. Ukukhutshwa kwelizwi kusazisa ngesibhengezo malunga nokuziphatha kweqela elichasayo, kunye nesingqisho sethu. Ukwasinika namagama enkuthazo (ngesiNgesi, ewe).
Zonke ezi datha, ukuba sifuna, ziya kulayishwa kuFacebook okanye ku-twitter, zipapashwe eludongeni lwethu kwaye abantu abacofa kuyo baya kuba nakho ukubona yonke idatha yohlanga lwethu. Sinako ukwenza ngokwezifiso ubunzima bethu kunye nokuphakama kubalo olungcono lweekhalori. Enye into endiyithandayo kukwazi ukubona, ukongeza kwindlela kwiimephu zikaGoogle, iigrafu zomsebenzi wethu.
Inketho yokugqibela yokuqaqambisa kukukwazi ukwenza inkqubo yokusebenza okuthile komgama kunye neenjongo zexesha, inxenye, umgama, ixesha okanye iikhalori. Kwakhona kwi-App ngokwayo sinokubona ukutya kukarhulumente kuhlaziywa ngexesha lokwenyani lemisebenzi yabantu.
Sinokubona zonke iirekhodi zethu kwiwebhusayithi ye Runtastic, kwaye sinokufaka idatha ngesandla xa sinokuthi senze imidlalo yangaphakathi.
Insiza ikwinguqulelo ngalinye Nge- € 4'99 kwaye ungene Simahla, lo maleko wokugqibela ngaphandle kokukhetha isidlali somculo, ukhuphiswano nabahlobo okanye ukuphuma kwelizwi, nangona ineVenkile yayo apho ungathenga khona ngokwahlukeneyo.
Inkqubo efana kakhulu neyangaphambili, ngokulula ngakumbi kunye neenketho ezimbalwa.
Sinokukhetha ukudlala uluhlu lwethu lomculo, ngelizwi elisixelela malunga nendlela yethu yonke imizuzu emi-5 (ngokungagqibekanga), jonga idatha yethu kwinkqubo ngokwayo kwimephu, ikhawuntari yekhalori, ukubanakho ukuthatha iifoto kwaye uzixhome indlela yethu, ukhetho loqeqesho kunye nokwabelana ngedatha yethu kuFacebook, kunye nokukwazi ukufaka imisebenzi yethu kwiwebhu, kunye nokumakisha indlela.
Ndiyisebenzisile okwethutyana kwaye ndiyithandile kakhulu, kodwa ndicinga ukuba eyangaphambili igqibelele kwaye ayibizi. Inenguqulo yayo yasimahla, kodwa ngaphandle kokhetho oluninzi njengokudityaniswa neetshathi zomculo, iifoto okanye ukucula amaxesha, kodwa ukuba ufuna ukubaleka kwaye ugcine umkhondo wenkqubela phambili yakho yeembaleki, uhlobo lwasimahla luya kuba lukhulu wena. Oko kwe pago Iyaxabisa i- € 7 kwaye iza ngesiNgesi.
Yi-App endihlala ndiyisebenzisa, yiyo loo nto ndiyigcina ndiyithanda ngokukhethekileyo, ilula kwaye isimahla, kwiscreen siyabona ukuba yeyiphi na inkqubo, apho idatha yexesha, umgama, isantya, ukuphakama , isantya siza kuthetha, ubuninzi kunye nobude. Sinokuthatha iifoto ngelixa sibaleka (kucetyiswa kuphela usuku) kwaye sinokubona uhambo lwethu kwiiMaphu kwaye silayishe idatha kwiwebhusayithi yethu kwaye sabelane ngayo kwinethiwekhi yoluntu. Isisiseko kodwa kufanelekile.
Ngokunyaniseka, ndikhetha iRuntastic Pro njengoko iyeyona igqibelele kwaye yexabiso eliphantsi kunabo bahlawulweyo, inonxibelelwano lwayo ngeSpanish (hayi amazwi) kwaye inomdla ngakumbi. Ngayiphi na imeko, isigqibo sele sisekwe kwiinkcukacha ezincinci eziza kutshintsha ngokuqinisekileyo ngohlaziyo ekuhambeni kwexesha. Ngethamsanqa, sinezo nguqulelo zintathu simahla ukuba into esiyifunayo kukubaleka nje nokurekhoda iziphumo zethu, ziya kusanela. Kodwa ndiyakholelwa ngokwam ukuba bayandiculela isingqisho endisiphetheyo kwaye banakho ukumamela umculo ngaxeshanye nomdlali wangaphakathi, yinto enokuthi ibonelele ngobomi bomzimba.
Wena, ungakhetha eyiphi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Ivenkile yosetyenziso » Iinkqubo zeembaleki zangaphandle
Ewe, phawula ngayo ukuba ndiyifumene kwaye kule veki inye ndaya entabeni ngebhayisekile, ke ndiza kukwazisa malunga nendlela ebihamba ngayo. Ukuba kuyenzeka ukuba wenze iphepha labafana kwiqonga le-actualiadadiphone ukuze ube neqela elijoyina le mithambo kwaye ngaloo ndlela uphawule ngayo yonke into malunga neendlela kunye nokuzilolonga. Apho ndikushiyela ihug nditshise calories 🙂
ukusuka kwindlela ye-tenerife las lagunetas monte entero ... 😛
Kulungile pulgoso, Ndiyoyika ukuba andicingi ukuba yile webhusayithi ilungileyo yokwenza olu hlobo lweforum lunomdla kangangokuba utsho, kodwa singasebenzisa eli candelo lamagqabaza ukwenza unxibelelwano ...
Yiba nexesha elihle kule mpelaveki yokutsha kweekhalori! Hahaha
Ewe, ndingumsebenzisi kolu hlobo lwesicelo.
Ngokukodwa (kwaye ukusukela kwiinguqulelo zayo zokuqala) zeMbaleki.
Kwirekhodi, i-Runkeeper skrini ilungile. Ujongano lomsebenzisi lutshintshele ngcono. Njengewebhu, apho ulawula khona iirekhodi zakho ngaphezulu kweGui ephuculweyo.
Njengeendaba ezingabalwanga, yongeza ukuba ungangena kwimisebenzi ngesandla, nakwiwebhu onokuyilandelwa kwi-intanethi ngelixa usenza.
Kwaye uninzi lwezinto onokuzikhetha kunokwenza i-billet andizukubala kwaye inokulandelwa kwindawo yayo: runkeeper.com
Lowo ukhulayo kwaye ukwiSpanish ngokupheleleyo yimicu. Apho i-portal ikwulwimi lwethu kwaye inabalandeli abaninzi besizwe, kunjalo.
Ifanele ikhankanywe nayo.
Enkosi ngengcaciso yakho Jordi,
Malunga nokhetho lweMbaleki, ndiyaxolisa ngokungazibeki zonke, sele ibacacisile kancinci kodwa ndiza kuyihlaziya ukuze ndiyithathe nayo, kodwa andifuni ukuphinda ndiphinde.
Kwi-Strands sele ndiyikhuphele kwaye ndibona ukuba imitya iyakuvumela na, ndiza kuyizama ngale mvakwemini kwaye ndiza kuphawula ngayo.
Enye into endixelelwe ukuba intle kakhulu kodwa andikazami yiSportypal.
Into ekulunge ukuyithelekisa ibhetri egqitywa sisicelo ngasinye, nangona ngokusisiseko iya kufana kakhulu kuba yonke into iya kuthathwa yi-GPS.
Ndizamile umgcini simahla kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo ngeyure ezi-3 ndikhwele ibhayisekile, kwaye ishiye i-iPhone 3GS yam ine-10% yobomi bebhetri.
Ndisebenzise i-Runkeeper, kodwa emva koko ndatshintshela kwi-Strands. Isicelo sonke / i-portal yeStrand ilunge kakhulu. Nangona ngoku uhlaziyo kwi-iOS4 lucotha kancinci kwi-3G yam.
Ngokubanzi, ubuncinci kwi-3G yam, bayishiya yonke ibhetri ishukuma kukusetyenziswa kwe-GPS, indivumela ukuba ndizisebenzisele uqeqesho okanye imidyarho emifutshane, ukuya kuthi ga kwiiyure ezimbini.
I-Runtastic ibonakala ifana ne-Strands, kodwa ukutshintsha iqonga kufuneka ndibone ngokucacileyo izibonelelo, kwaye inyani kukuba, ukungena kwiiforum ze-tourtastic.com kwaye ukubona uninzi lwazo ngesiJamani kuyandiphosa.
Enye into endingakhange ndiyizame: I-Trailhead, nangona ijongeka ngathi yi-North Face kwaye ndicinga ukuba izakujolisa ngakumbi entabeni.
Ukubulisa kunye neekhilomitha ezininzi.
Yhu, ndilibale abanye ngesitayile:
Ibhalansi eNtsha yeNBTotalFit
Ndisebenzisa i-runtastic kwaye ndonelisekile sesi sicelo!
Emva kokuzama ii -apps ezininzi, ngokungathandabuzekiyo zibalaseleyo kwaye zigqibelele!
Molweni ekuseni nonke. Ndinokuthandabuza okuncinci kubasebenzisi beRuntastic kwi-Ipod Touch. Ndisifakile isicelo kwaye indixelela kuphela isantya kunye nomgama ngelixa ndinonxibelelwano lweWi-Fi (Oko kukuthi, kuthatha ixesha elingakanani ukuphuma endlwini kwaye ufumane iimitha ezili-10 kude ...) lonke ixesha elenzayo ungaphawuli kwanto ndide ndibuyele ekhaya ndibuye ndibuye ndibuye ndidibanise ne-wifi. Ngaba oku kuyenzeka komnye umntu? Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba angenza njani ukuba ndilinganise isantya kunye nomgama ngaphandle konxibelelwano lweWi-Fi? Enkosi kubo bonke!
I-Ipod Touch ayinayo iGPS !!!!! Ayinakusebenza! Kodwa ungangenisa idatha ngesandla !!
Ndihlala neRuntastic… iyamangalisa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UkhethoLoader 2.0.1-1 - Izicelo-Cydia [Simahla] -Uhlaziyo oluBalulekileyo